Dugsiyada Minnetonka waxaa lagu qabtaa Dabaaldeggii 11aad ee Sannadlaha ee Abaalmarinta Adeegga
Nofeembar 6 , 2020
Dugsiyada Minnetonka waxay ku faraxsan yihiin inay u dabaaldegaan sannad-guuradii 11aad ee Dabaaldega Adeegga Talaadada, Nofeembar 10. Dabaaldega Adeeggu wuxuu aqoonsan yahay ardayda, qoysaska iyo xubnaha bulshada ee sida ugu fiican ugu adeegay siyaabo muhiim ah sanadkii la soo dhaafay. Munaasabadan ayaa dhici doonta sanadkan, iyada oo loo marayo fiidiyow fiidiyow ah oo laga sii daayo YouTube.
The bulshada Minnetonka Dugsiyada loogu yeedhi habayn in si Celebration of Service Ciyaar dalwaddii on Tuesday, November 10 laga bilaabo 6:30 pm link The si aad u eegto Ciyaar ay diyaar noqon doono ka hor dhacdada ugu minnetonkaschools.org/CelebrationofService
Dabaaldega Adeeggu wuxuu soo bandhigayaa siyaabo badan oo shakhsiyaadkani ay si togan ugu saameeyeen kuwa kale bulshada dhexdeeda. In ka badan 250 arday, qoysas iyo dad waaweyn oo kasbaday Abaalmarinta Adeegga Tabaruca Madaxweynaha ama Warqadda Varsity ee Adeegga Bulshada ayaa la aqoonsan doonaa.
Dugsiyada Minnetonka waxay ahaayeen wakiil cadeyn u ah barnaamijka Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha Mareykanka - oo loogu talagalay in loogu mahadceliyo Mareykanka oo, iyagoo muujiya dadaalkooda, ku dhiirrigeliya kuwa kale inay u adeegaan — illaa 2007. Sannad kasta, boqollaal ardayda Minnetonka ah iyo xubnaha qoyska ayaa codsada oo qaata Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha.
Connor Clair, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan MHS isla markaana helay Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha, ayaa bilaabay iskaa wax u qabso sidii uu wax badan ugu qaban lahaa bulshadiisa. Waxaa ka mid ah mashaariicda kale, wuxuu abuuray faa'iido-la'aan si uu ugu tababaro dadka waayeelka ah adeegsiga tikniyoolajiyadda.
Iskaa wax u qabso ayaa wax badan iga beddelay, ayuu yidhi Clair. Kasbashada Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha waxay muujineysaa in shaqada adag ay miro dhal tahay, haddii aad dadka kale wanaag u qabatana waa la aqoonsan doonaa. Clair wuxuu ku dhiiri geliyaa ardayda kale ee ka shaqeynaya abaalmarintan inay ka dhigaan tabaruceyaashooda madadaalo iyagoo raadinaya habab ay ku dhexgalaan u adeegida bulshada howlaha ay horeyba ugu riyaaqeen.
"Shaqadayda iskaa wax u qabso ah waxay i bartay naxariis iyo naxariis waxayna i siisay dareen bulsheed," ayay wadaagaan Josie Frandrup, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan MHS oo abaalmarin heshay. Frandrup wuxuu naadi ka bilaabay MHS oo la yiraahdo Minnetonka Mail, oo diiradda saareysa qorista waraaqaha waayeelka ee xarumaha daryeelka waayeelka. Abaalmarinta dhabta ahi waa dareenka aad hesho markaad tabaruceyso, ayay tidhi Frandrup. "Taasi waa abaalmarin lafteeda."
“Mid ka mid ah yoolalka Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka waa in lagu dhiirrigeliyo ardaydeena inay fahmaan una adeegaan waxa ugu weyn,” ayay wadaagaysaa Sarah Johnson, Khabiirka Adeegyada Bulshada ee Dugsiyada Minnetonka. "Waan ognahay in markaan wax u celino kuwa kale, aan helno wax badan oo soo laabasho ah."
Iyada oo qayb ka ah himiladan, Degmadu waxay abuurtay Xafiiska Adeegga Tonka . Tonka wuxuu u shaqeeyaa sidii loo dhisi lahaa isku xirnaanta ardayda dhigata fasalada K-12 iyo ururada aan macaash doonka aheyn ee ku nool bulshada weyn ee Twin Cities wuxuuna marti galiyaa barnaamijyada abaalmarinta la xiriira adeegyada ee Dugsiyada Minnetonka, oo ay ku jiraan Dabaaldega Adeegga.
Mar labaad, waad dhegeysan kartaa Celebration of Service premiere premiere on Tuesday, November 10 starting at 6:30 pm Xidhiidhka si aad u daawato hordhaca ayaa la heli karaa ka hor dhacdada minnetonkaschools.org/CelebrationofService
Barnaamijka VANTAGE wuxuu bilaabmay Sanadkii 8aad isagoo wata Fursado iyo Xidhiidh
VANTAGE, barnaamijka khibrada leh, barnaamijka barashada mashruuca ku saleysan ee Minnetonka High School, wuxuu bilaabay sanadkiisii sideedaad dayrtaan iyadoo ay la socdaan 320 arday inta udhaxeysa toddobada meelood ee uu diirada saarayay.
Ardayda MHS waxay Marti Geliyaan Sannadkii saddexaad TEDxYouth @ MinnetonkaHS
Dhacdada saddexaad ee sanadlaha ah ee TEDxYouth @ MinnetonkaHS ayaa la wadaagtay farriin ah "Dib-u-qeexida Guusha."
U dabaal degaya Shaqada Cilmi-nafsiga Iskuulka
Khubarada cilmu-nafsiga ee iskuulku waxay taageeraan wanaagga ardayda waxayna gacan ka geystaan abuurista jawi waxbarasho oo ay ardaydu ku daba-geli karaan heerarkooda ugu sarreeya ee tacliin iyo shaqsiyeed gaar ahaaneed.
Ku soo biir Dugsiyada Minnetonka ee Virtual Premiere ee Dabaaldega Adeeg Talaadada, Nofeembar 10 markay tahay 6:30 pm
Waxqabadka dhicitaankii Masraxa Minnetonka wuxuu keenaa Farxadda Waddada Bannaanka
Masraxa Minnetonka ayaa ikhtiraacay si loo abuuro fursad COVID-aamin ah oo loogu talagalay ardayda si ay ugu qabtaan heesaha ay ugu jecel yihiin dhagaystayaasha banaanka.
Diirad saarid heer sare iyo lahaansho
Guddiga Dugsiga iyo hoggaamiyeyaasha degmadu waxay u heellan yihiin bixinta jawi iskuul oo ay dhammaan ardayda dareemaan ammaan, soo dhaweyn, taageerid iyo aqbalaad.